Photoshop dia mampiasa algorithm miafina ho an'ny sary taratasy | Famoronana an-tserasera
Photoshop dia mampiasa algorithm tsy fantatra ka tsy azo sokafana ny sary taratasy
Raha misy antony amin'ny fotoana rehetra dia nanandrana nanokatra ny sarin'ny taratasim-bola tamin'ny Fampiharana famoronana sary Photoshop, hihaona amin'ny tsy ampoizina tsy ampoizina isika. Ny anton'izany dia satria ny programa dia mandefa fampitandremana izay tsy mamela ny fiasa amin'ny sary izay misy ifandraisany amin'ny vola.
Izany dia satria ao amin'ny Photoshop, ny algorithm iray dia nampidirina tao amin'ny kinova CS izay mahay mamantatra sary izay miresaka momba ilay farantsa. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava amin'ny antsipiriany bebe kokoa isika hoe maninona ny Photoshop no mampiasa algorithm tsy fantatra ka tsy azo sokafana ny sary taratasy.
Raha sendra nanao io hadisoana io izahay, dia ho tsikaritray fa mampiseho anay URL ilay programa ary mitarika anay hahafantatra vaovao misimisy momba an'io (www.forome.org). An'ity tranonkala ity Vondrona Banky foibe Deter Lawrence na fantatra amin'ny fanafohezana CBCDG, ity dia vatana iray ahitana banky foibe 27 ary mifantoka amin'ny ady amin'ny fanaovana sandoka nomerika amin'ny vola.
Ho fanampin'izany, izy ireo dia tompon'andraikitra amin'ny programa toa ny Photoshop, Corel Draw na Paint Shop Pro, manana an'ity rafitra detection ity raha tsy misy ny mpamorona programa manana ny fahalalany ny fomba itovizan'ny algorithm marina omena azy ireo. Tamin'ny taona 200 no fotoana nandraisan'i Photoshop ity rafitra detection ity, tompon'andraikitra iray amin'ny orinasa Adobe no nanondro an'io fomba boaty mainty, izay tsy fantatra ny atiny ananany.
Rehefa nanontaniana ny talen'ny voalaza etsy ambony momba ny antony fampiharana an'io algorithm io dia namaly izy hoe "Amin'ny maha-mpitarika tsena sy olom-pirenena vanona antsika dia toa manao ny tsara fotsiny isika”. Ary mazava ho azy, araka ny lalàna dia milaza fa ny adolantsento dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fahafahany mampihatra fanaraha-maso toa an'io, saingy nandray ny fanapahan-kevitra izy ireo hanaiky izany fangatahana izany avy amin'ny CBCDG ary hampiditra azy.
Toy izany koa no mitranga amin'ny hafa programa ho an'ny famolavolana sary.
Tamin'ny voalohany dia noheverina fa ny algorithm dia natao hamantarana lamina manokana ary miaraka amina fandaharana mitovitovy amin'ny antokon-kintana Orion, izay no antony nanjary nantsoina hoe antokon-kintana EUrion io lamina io, satria mazàna dia manana teboka dimy ireo banknotes rehetra.
Ilay mpanao famotorana Markus Kuhn, dia ilay nahita ny lamina sendra tamin'ny 2002, raha nanao andrana tamin'ny fampiasana mpanonta Xerox vaovao, izay nandà tsy afaka nanao pirinty ny tapakila. Ireo fepetra tsy maintsy ananan'ireto teboka dimy ireto mba hahitana azy dia mbola mistery, hoy ny mpikaroka Kuhn nanazava tamin'ny resadresaka nifanaovana vao haingana, fa raha mainty sy fotsy ny sary, tsy hita ny algorithm, fa raha misy karazana loko hita dia azo jerena izany.
Amin'izany fomba izany, ny halavirana mety misy eo anelanelan'ny teboka tsirairay dia tsy fantatra ihany koa ary ity dia antsipiriany iray hafa izay raisina.
Ho an'ny maro, peratra omron izy ireo no mampahafantatra ny Photoshop raha ny momba ny sarin'ny volavolan-dalàna iray, fa ny valiny momba izany dia tsia na farafaharatsiny tsy izany ihany no rafitra manao izany. Ny mpikaroka ao amin'ny University College London, Steven J. Murdoch, dia nanao fitsapana niaraka tamin'ny Fivarotana Photoshop sy Paint fotoana fohy taorian'ny fandaharana ireo ny adiresy algorithm. Gaga i Steve fa rehefa voasarona ny peratra kintana, dia mbola hitan'ny programa ireo volavolan-dalàna ary tsy azo novaina ny sary.
Tao anatin'ity andrana ity dia hita fa ny Photoshop sy ny PSP algorithm dia nitovy ny valiny.
Ankoatr'izay, ny fotoana hamerenana ny lesoka dia miankina amin'ny sary izay nohadihadiana ary izany dia rehefa nanao ireo fitsapana rehetra ireo sy ny famotopotorana manokana dia nanome toky i Murdoch fa namorona ny orinasa Diginarc rafitra mandroso mamela ny fitadiavana vola.
Ho famaranana, ny Photoshop dia mampiasa algorithm tsy fantatra ka tsy afaka hosokafana ny sary taratasy, satria noho ny antony fiarovana dia nampiharina izy io ka tsy azo sandoka ny vola taratasy nomerika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Photoshop dia mampiasa algorithm tsy fantatra ka tsy azo sokafana ny sary taratasy
Moraglar Majere dia hoy izy:
Ny Xerox mpanonta dia tsy mamela anao scan azy ireo mivantana akory
Valiny tamin'i Moraglar Majere
Juan Carlos Vera dia hoy izy:
Hafakely, hafahafa ... vao nanokatra sary tao amin'ny PS aho ...
Valiny tamin'i Juan Carlos Vera
Mamorona alokaloka azo tanterahina amin'ny Photoshop haingana